Xildhibaan kamid ah Golaha wakiilada Putalnd oo sheegey in uu Dil kabadbaadey – Radio Baidoa
Xildhibaan kamid ah Golaha wakiilada Putalnd oo sheegey in uu Dil kabadbaadey
By Webmaster	 On Jan 16, 2020
Xildhibaan Faarax Maxamed Dalmar oo kamid ah Golaha Wakiilada Puntland ayaa sheegay in xalay rag hubeysan ay weerar kusoo qaadeen,isla markaana ay rasaas ku fureen,hayeeshee uu ka badbaadey.
Xildhibaanka ayaa xilliga la weerarayey waxaa uu Gaari kaga degay gurigiisa hortiisa,balse ay rag hubeysan rasaas ku fureen,waxaana uu sheegay in uu ka badbnaadey rasaas dhowr ah oo lagu furey gurigiisana uu galay.
Guddoomiyihii hore ee gobolka Nugaal Cumar Cabdulaahi farawayne kana mid ah Golaha Wasiirada Puntland oo tegay Hoyga Xildhibaanka la weeraray ayaa sheegay inay arkeen raadadka raggii weerarka kusoo qaadey Xildhibaanka.
Xildhibaan Faarax Maxamed Dalmar ee xalay weerarka lagu qaadey oo shalay Warbaahinta kula hadlayaya Magaalada Garoowe ayaa waxaa uu kasoo horjeestey xil ka qaadistii Guddoomiyihii hore ee Baanka dhexe ee Puntland oo uu sharci daro ku tilmaamay,sidoo kale uu eedeyn u jeediyey Madaxwayne ku xigeenka Puntland Axmed Cilmi cismaan Karaash.
SAWIRO; QM iyo Somaliya oo Xoojinaya Dadaalada lagu doonayo in lagu sameeyo iskaashi waxgal leh
xildhibaannada Cusub ee Dowlad goboleedka Galmudug Maanta ayaa lafilayaa inay dhageystaan khudbadaha musharixiinta Galmudug